Akụkọ - Otu esi echekwa ndụmọdụ ngwa bulldozer ogologo oge anaghị arụ ọrụ
Ọbịbịa nke bulldozers nyeere anyị aka dozie nsogbu nke igwu ala na nkume. Ma a gaghị eji bulldozers mee ihe ruo oge ụfọdụ n'ihi oge mgbanwe. Ị maara ka esi edobe akụkụ bulldozer na-ejighị ya
1. Nkwadebe tupu adọba ụgbọala.
Hichaa akụkụ niile nke ngwa bulldozer, wee tinye igwe n'ime ụlọ akọrọ, ọ bụghị n'èzí.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọ bụrụ na etinyere ya n'èzí, họrọ ala dị larịị, nke ejiri osisi kpuchie ya. Mgbe ị na-adọba ụgbọala, ị kwesịrị ị na-ekpuchi ya na akwa ákwà. Na-arụ ọrụ mmezi dị ka mmanụ, mmanụ griiz na mgbanwe mmanụ.
A ga-ekpuchi akụkụ ndị ahụ ekpughere nke hydraulic cylinder piston rod na ntuziaka wheel ndozi na bọta. Maka batrị ahụ, wepụ "adịghị mma" ma kpuchie batrị ahụ, ma ọ bụ wepụ ya na ụgbọ ala ma chekwaa ya iche. Ọ bụrụ na mmiri oyi bụ mmiri oyi. A naghị ahapụ ya mgbe okpomọkụ dị n'okpuru 0 ℃, a ga-agbakwunye antifirizi na mmiri jụrụ oyi.
2. Nchekwa mgbe a na-adọba ụgbọala.
N'oge a na-adọba ụgbọala, a na-amalite bulldozer otu ugboro n'ọnwa iji na-anya ụgbọ ala dịtụ anya iji guzobe ihe nkiri mmanụ ọhụrụ n'akụkụ mmanụ mmanụ nke akụkụ nke ọ bụla ma gbochie akụkụ ndị ahụ nchara.Mgbe ị na-arụ ọrụ ngwaọrụ na-arụ ọrụ, wepụ griiz a na-ekpuchi na mkpanaka piston nke hydraulic cylinder, wee tinye griiz ahụ mgbe ọ rụchara ọrụ. Iji kwụọ batrị ahụ, a ghaghị ịgbanyụ onye na-egwupụta ihe mgbe ọ na-ebu.
3. Lezienụ anya mgbe ụgbọala na-adọba ụgbọala.
Mgbe ogologo oge kwụsịrị, ọ bụrụ na n'oge nkwụsị nke njedebe nke ọnwa ọ bụla maka ọrụ mgbochi nchara, tupu ejiri ya, a ga-emeso ngwa bulldozer dị ka ndị a: mepee mmanụ mmanụ na nkwụnye mmanụ ọ bụla, wepụ mmiri agwakọta.Wepu isi cylinder ahụ, jupụta valvụ ikuku na ogwe aka rock na mmanụ, ghọta ọnọdụ ọrụ nke valvụ ikuku, ma ọ bụrụ na enwere ihe ọ bụla na-adịghị mma, a na-etinye dozer ahụ n'ọnọdụ na-adịghị ahụkebe na-enweghị mmanụ dizel, na dozer na-atụgharị ya na mmalite. .Naanị otu a ka dozer nwere ike ịmalite.
Oge nzipu: Nov-07-2021
Roba Track Rollers, Ihe na-agba Track Roller, Bolt siri ike, Ebu n'okpuru ụgbọ ala Excavator, Excavator ịwụ ịcha Edge, Akụkụ ihe mkpuchi ịwụ ịwụ,